Forex မှတ်တမ်း၏ အဆင့်တွေက ဘာတွေလဲ?
Forex ဈေးကွက် ခုလို ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာ စူးစမ်းဖူးပါသလား? ဤယေဘုယျဗဟုသုတသည် သင့်စက်ဝန်းကို ချဲ့ထွင်စေပြီး၊ ဈေးကွက်ကို အမြင်အသစ်နဲ့ မြင်စေမှာပါ။
Forex ဈေးကွက် အလုပ်လုပ်ပုံ နားလည်ရန်၊ ရှေ့ဦးစွာ"နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစနစ်"ကို သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစနစ်သည် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတွင်း ငွေကြေးဆက်နွယ်ချက်များ ဘယ်လိုစုစည်းထားလဲဆိုတာ ဖော်ပြတဲ့ နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်စည်းမျဉ်းများ အစုပဲဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် ခြောက်ပိုင်းပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ:• နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေ စနစ်များ။
• ငွေလဲနှုန်း ထူထောင်၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ယန္တရား။
• နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှု ဟန်ချက်ညီရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။
• ငွေကြေး လဲလှယ်နိုင်မှု စည်းမျဉ်းများ။
• နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုနှင့် ရွှေဈေးကွက် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ နည်းလမ်း။
• ငွေကြေးဆက်နွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းသည့် အစိုးရများကြား အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ။
၁၉ရာစု အထိ၊ အဓိက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးများ၊ တရားဝင်ငွေကြေးစနစ်များမရှိခဲ့ပါ (ထိုအချိန်က ယင်းတို့သည် ဥရောပ၊ အမေရိက၊ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ)။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် - စနစ် ခြောက်ပိုင်းမှာ - မတည်ရှိခဲ့သေးပါ။ တရားဝင်နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစနစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာ ၁၈၆၇တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုနှစ်တွင် ပထမဆုံး နိုင်ငံတကာငွေကြေးညီလာခံအား ပဲရစ်မြို့တွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၁။ "ရွှေ စံနှုန်း"
ရွှေသည် နိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်တွင် အဓိကကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ကမ္ဘာ့အဓိက စီးပွားရေးများမှ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သော ဗြိတိန်အင်ပါယာသည် ပေါင်လဲလှယ်နှုန်းကို ရွှေနှင့်ပုံသေမှတ်ခဲ့သည်။ အစိုးရသည် ရွှေတစ်အောင်စလျှင် ၄.၂၄၇ ပေါင်စတာလင် ဝယ်ရန် (သို့) ရောင်းရန် သဘောတူခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရွှေစံနှုန်းအား USAမှ တည်ထောင်ခဲ့ပြီး (ရွှေတစ်အောင်စလျှင် $၂၀.၆၇နှင့် ညီမျှသည်)၊ အနောက်ဥရောပနှင့် ရုရှားမှ ၁၈၉၇တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။
- နှုန်းအတက်အကျကြမ်းမှု မရှိခြင်း။
- လွတ်လပ်သော နိုင်ငံငွေကြေးမူဝါဒ ရှိရန်မစွမ်းနိုင်ခြင်း။
- ငွေပမာဏနှင့် ရွှေထုတ်လုပ်မှုကြား တင်းကျပ်သော ဆက်စပ်မှု (ရွှေထုတ်လုပ်မှု ပြတ်တောက်ခြင်းသည် လိုငွေဖြစ်ပေါ်စေချိန်တွင် ရွှေအသစ်အပ်နှံမှုသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖြစ်စေသည်)။
- ပထမကမ္ဘာစစ်အစတွင် အစိုးရအနေဖြင့် သူတို့၏ ကြီးမားသော စစ်တပ်ကုန်ကျစရိတ်များထောက်ပံ့ရန် ငွေစက္ကူများ ပိုထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက် ရွှေစံနှုန်းပြီးဆုံးခဲ့သည်။
II. ကမ္ဘာစစ်ပွဲ နှစ်ခုအကြား
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးမူဝါဒ၏ ဒုတိယကာလသည် Genoaတွင် ၁၉၂၂ခုမှာ စတင်ခဲ့သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်အနိုင်ရရှိသူများသည် သူတို့နိုင်ငံငွေကြေးများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများရခဲ့သည်။
စနစ်အသစ်၏ အခြေခံမှာ ရွှေနှင့် အဓိက - ရွှေအဖြစ်ပြောင်းခဲ့ကြသည့် - အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဗြိတိန်ငွေကြေးများဖြစ်သည်။ နိုင်ငံငွေကြေးများသည် ငွေပေးချေမှုနှင့် ချန်လှပ်ထားမှု၏ နိုင်ငံတကာကြားခံများဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည် သူတို့အား ရွှေစံနှုန်း ကန့်သတ်ချက်ကိုကျော်လွှားစေနိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်သည် ဖော်ပြပါနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးကျန်းမာမှုအပေါ် မူတည်လာခဲ့သည်။
ရွှေလက်ရှိပေါက်ဈေးအား ထိန်းထားခဲ့ကြသည်။ ရွှေအတွက် ငွေလဲနှုန်းသည် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း (အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်နှင့် ဂရိတ်ဗြိတိန် ငွေကြေးများ)နှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးများမှတဆင့်လည်းကောင်း၊ နှစ်ခုစလုံးဖြင့်လုပ်နိုင်ပါသည်။
- နိုင်ငံငွေကြေးများအား နိုင်ငံတကာ ငွေပေးချေမှု-အရံ အတွဲများအဖြစ်သုံးခဲ့ကြသည်။ ရွှေစံနှုန်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့် ကန့်သတ်ချက်များအား ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
- လွတ်လပ်စွာ အုပ်ချုပ်သောအချိန်တွင် ငွေလဲနှုန်းများ ပြန်လည်နာလန်ထူလာခဲ့သည်။
- ငွေလဲနှုန်း စည်းမျဉ်းသည် ကမ္ဘာ့ငွေကြေးစနစ်၏ လိုအပ်ချက်အသစ်ဖြစ်လာပြီး၊ နိုင်ငံတကာညီလာခံနှင့် အစည်းအဝေးများ၏ ပုံစံအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။
- နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးမူဝါဒသည် နိုင်ငံစီးပွားရေးပေါ်မူတည်ပါသည်။
- စနစ်သည် ငွေကြေးစစ်ပွဲများနှင့် ငွေတန်ဖိုးကျခြင်းအတွက် အခြေအနေများ ဖန်တီးခဲ့သည်။
Genoa စနစ်သည် ၁၉၂၉-၁၉၃၃ခုနှစ် ကြီးမားသော စီးပွားပျက်ကပ်တိုက်စားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ရှေ့ဦးစွာ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ထိခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်၊ အရေးအခင်းသည် အခြားစီးပွားရေးများထံ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
III. ဘရက်တန်ဝုဒ် စနစ်
သမိုင်းတွင် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးမူဝါဒ၏ နောက်ထပ်အရေးကြီးအဆင့်မှာ ဘရက်တန်ဝုဒ်တွင် ၁၉၄၄မှာစတင်ခဲ့ပါသည်။
ဘရက်တန်ဝုဒ်စနစ်၏ အဓိကစိတ်ကူးမှာ ငွေစက္ကူ၏ ပြဌာန်းချက်နှစ်သွယ် - ဒေါ်လာနှင့် ရွှေတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံတကာငွေကြေးများကို အမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ် ပုံသေသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လာအား ရွှေအဖြစ် ပုံသေနှုန်း တစ်အောင်စလျှင် $၃၅တွင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာသည် အဓိကအရံနှင့် ကိုးကားငွေကြေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ပါဝင်သည့်နိုင်ငံများသည် ကိန်းသေအဆင့်တွင် သူတို့ငွေကြေးနှုန်းများအား ဒေါ်လာအဖြစ်ကိုင်ထားကြသည်။ သွေဖည်မှုသည် ၁%ထက်မကျော်ခဲ့ပါ။ နိုင်ငံတကာငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့အား ဤစနစ်ကိုထိန်းချုပ်ရန် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- ဤကာလအတွင်း ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသည် လျင်မြန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်။
- ငွေကြေးဖောင်းပွမှု နိမ့်ခြင်း။
- အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း ကျဆင်းလာခြင်း။
- အမေရိကန်တွင် အလုပ်သမား ထုတ်လုပ်မှုသည် ဂျပန်နှင့် ဥရောပထက်နည်းသည်၊ ၎င်းသည် ဥရောပနှင့် ဂျပန်မှ အမေရိကန်သို့ ပို့ကုန်များမြင့်တက်မှုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အနောက်ဥရောပတွင် ဒေါ်လာပမာဏကြီးရှိခဲ့ပြီး၊ ဘဏ်များမှ ထိုဒေါ်လာများအား အမေရိကန် ဘဏ္ဍာတိုက်အာမခံတွင် မြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏ ပြင်ပအကြွေးမြင့်တက်လာခဲ့သည်။
- ထို့အပြင်၊ ဥရောပဗဟိုဘဏ်အချို့သည် ၎င်းတို့၏ ဒေါ်လာများအား ရွှေအဖြစ်လဲရန် တောင်းဆိုခဲ့သည့်အတွက် အမေရိကန်ရွှေအရထားမှု စတင်ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ ဒေါ်လာမှ ရွှေလဲလှယ်ခြင်းအား ၁၉၇၁တွင် တရားဝင်ရပ်ပြစ်ခဲ့သည်။
ရွှေတွင်ပါဝင်သည့်အရာများ လျှော့နည်းလာသည့်အတွက် - အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုးကျဆင်းမှု နှစ်ခါ - ၁၉၇၁ နှင့် ၁၉၇၃ တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင်း စနစ်သေခဲ့သည်။
IV. ဂျမေကန် စနစ်
စတုတ္ထကာလသည် Kingston (ဂျမေကာ)တွင် ၁၉၇၆တွင် စတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံများသည် သူတို့လိုချင်သည့် မည်သည့်ငွေလဲနှုန်း အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုမဆို ရွေးချယ်ရန်အခွင့်အရေးရခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံများအကြား ငွေကြေးဆက်နွယ်မှုများအားသ နှုန်းရှင်ငွေလဲနှုန်းတွင် ရှာတွေ့ခဲ့ကြသည်။ ငွေလဲနှုန်းများအား ဈေးကွက်တွန်းအားများ - ဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းလိုအားဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
ငွေကြေးနှုန်းအတက်အကျသည် အကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ပေါ် မူတည်သည်:
၁။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် နိုင်ငံငွေကြေးများ၏ ဝယ်လိုအား/ရောင်းလိုအား
၂။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် ပြည်တွင်းငွေကြေး၏ ဝယ်ယူမှုအား၊ တကယ့်တန်ဖိုးအချိုးအစားများ
နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်သည် နိုင်ငံ၏ သွင်းကုန်၊ ခရီးစွားများ အသုံးစရိတ်နှင့် အပိုငွေပေးချေမှုများပေါ်မူတည်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားငွေပံ့ပိုးမှု ပမာဏအား ပို့ကုန်နှင့် လက်ခံရရှိသည့် အကြွေးပမာဏဖြင့်သတ်မှတ်ပါသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့် ရွှေပံ့ပိုးမှု - အဓိက အရံပိုင်ဆိုင်မှုများ - သည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်မှုနှင့် ငွေကြေးအလွှဲအပြောင်းများ လျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာမှုနှင့် အမြန်မလိုက်နိုင်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ အရံပိုင်ဆိုင်မှုအသစ်သည် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပြီး၊ "အထူးဆွဲအခွင့်အရေးများ" (SDR)ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ SDRသည် အတုအရံဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှု တူရိယာဖြစ်သည်။ အထူး Drawing အခွင့်အရေးများအား ငွေကြေးတောင်း အခြေခံပေါ်တန်ဖိုးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ တောင်းတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ယူရို၊ ဂျပန်ယန်း၊ ပေါင်စတာလင်နှင့် တရုတ်ယွမ် (၂၀၁၆မှစပြီး) ပါဝင်သည်။ IMFသည် SDRsကို အတွင်းပိုင်း စာရင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သုံးသည်။ အဆိုပါရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည် အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များ SDRs သတ်မှတ်ရန်နှင့်၊ သူတို့အစိုးရ အပြည့်အဝယုံကြည်မှုနှင့် အကြွေးဝယ်ခြင်းဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံပြုကြသည်။
နိဂုံးချုပ်ရသော်၊ Forexသည် သမိုင်းအရှည်ကြီးဖြစ်တည်ခဲ့သည်ဟု ပြောနိုင်ပါသည်။ အချို့သိပ္ပံပညာရှင်များမှ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုမှာ ၁၇၀၀၀-၉၀၀၀ BCကာလများထဲမှ စတင်ခဲ့သည့်ဟု ယူဆကြသော်လည်း၊ ပိုရှုပ်ထွေးသော နိုင်ငံတကာငွေကြေးစနစ်သည် ၁၈၆၇ထဲက တည်ရှိခဲ့သည်။ Forex သမိုင်းတွင် အဓိက ကာလလေးခုရှိခဲ့သည်: "ရွှေစံနှုန်း"၊ "ရွှေလဲလှယ်မှုစံနှုန်း"၊ "ဘရက်တန်ဝုဒ် စနစ်"နှင့် "ဂျမေကန် စနစ်" ဖြစ်သည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများတိုးချဲ့လာမှုသည် စနစ်များကို မကြာခင်ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
forex ကုနျသှယျ forex exchange ငွေကြေးများ